IAmerican Express izakuzisa iApple Pay eSpain | IPhone iindaba
IAmerican Express izakuzisa iApple Pay eSpain
Izolo inkomfa yabatyali mali ibibanjelwe kuyo I-Apple ibhengeze amanani entengiso yezixhobo zayo, kwaye apho sinokubona ukuba inkampani esekwe eCupertino ithengise njani ii-iPhones ezizizigidi ezingama-48, i-9,9 yezigidi ze-iPads kunye nee-5,7 zezigidi zeMac. Enye idatha engakhange ikhankanywe ziiyunithi zeWatch Watch ezithengiswe kule kota yokugqibela apho iApple Watch ifikelele kumazwe amaninzi.
Kodwa ayithethwanga kuphela malunga neziphumo zoqoqosho, kodwa kunye ne-CEO ye-Apple yathatha ithuba lokubhengeza umanyano neAmerican Express ukukhawulezisa ukufika kweApple Pay kwi2016 kwamanye amazwe. Phakathi Amazwe akhankanywe nguCook ngokucacileyo yiSpain, iSingapore neHong Kong. Kubonakala ngathi iApple iqala ukusithathela ingqalelo. Masibone ukuba ukumiliselwa okulandelayo kwabo baseCupertino basibandakanya kwibatch yokuqala kunye neFrance neJamani.
Ngokuka-Apple la mazwe mathathu ziimarike eziphambili ukwandisa le teknoloji yokuhlawula ngaphandle konxibelelwano. Olu manyano luza kufika ngaphambi kokuphela konyaka eCanada nase-Australia, ke abasebenzisi kula mazwe baya kuba nakho ukonwabela obu buchwephesha phambi kokuphela konyaka. Kwelinye icala, abasebenzisi baseSpain kuyakufuneka balinde unyaka olandelayo ukuba basebenzise i-iPhone yethu njengendlela yokuhlawula ezivenkileni nakwiinkonzo zikarhulumente.
Oko yasungulwa, I-Apple Pay ifikelele e-United Kingdom kuphela apho zilishumi elinambini kuphela iibhanki Baye baguqula le teknoloji njengendlela yokuhlawula. Kwelinye icala, e-United States sele zingaphezulu kwe-1000 yeebhanki kunye namaziko emboleko esele enika inkxaso kwi-Apple Pay. Ngoku kufuneka silinde amarhe ukuqala ukujikeleza malunga nomhla wokufika komanyano lweAmerican Express neApple Pay.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » IAmerican Express izakuzisa iApple Pay eSpain
I-United States ihlaziya ubugqwetha beJailbreak
Emva komphumo ngumdlalo ongenakuphulukana nawo kwi-iPhone yakho entsha